UDonald uzoqongelela imali yokuxhasa abaswele ngekhonsathi
UMCULI weR&B, uDonald Moatshe, uzocula kwikhonsathi ahlose ngalo ukusiza imiphakathi eswele Isithombe:ESIGCINIWE
CHARLES KHUZWAYO | June 22, 2020
UKUBHUQWABHUQWA yindlala kwabantu bakuleli selokhu kuqubuke isifo seCovid-19 kugqugquzele umculi we-R&B, uDonald Moatshe, ukuba enze ikhonsathi ezosakazwa ezinkundleni zokuxhumana.
Lezi zindaba zidalulwe nguye uDonald (35) ekhasini lika-Instagram. Kuleli khasi ube esebhala ukuthi yena ngokubambisana neDonito bethula iTeam Donald Cares Concert Live Stream.
"Le khonsathi izosiza ukuqongelela imali yokuxhasa abafowethu nodadewethu ababhuqwabhuqwa yindlala ngenxa yokuswela ukudla futhi isize nasekutheni bakhokhele ugesi," kusho uDonald wodumo lwengoma ethi Denial.
Uthe amathikithi okubona konke okuzobe kwenzeka kulo mcimbi ongoJulayi 2 ngo8 ebusuku, aseyatholakala ngoR50 eHeroticket. Uthe iyonandlela abuyisela ngayo emphakathini, ikakhulukazi kubantu abakade babewa bevuka naye selokhu angena emculweni.
Kulo mcimbi kulindeleke ukuba uDonald angaphumi esiteji engawaculanga amanoni akhe athi Over The Moon, Ngiyazifela, I Deserve, Crazy But Amazing, Sanctuary Love, Unpredictable nelithi Never Let You Go. UDonald wumculi odabuka endaweni yaseKraalhoek, eNorth West.
Waqala ukucula esemncane kabi ekhwayeni yesonto, okuyilapho ikhono lakhe lavumbuka khona. Emculweni okhokhelwayo ungene ngo-2008, evumbululwa wuDJ Cleo, okunguye owaqopha i-albhamu kaDonald yokuqala engamukelekanga kahle endimeni yomculo.
Washiya kuCleo wazisungulela eyakhe inkampani lapho akhipha khona icwecwe lakhe lokuqala elalithi Train of Love ngo-2011. Kusukela lapho akaphindanga wabheka emuva njengoba esebalwa nabanye abaculi abavelele emculweni we-R&B.